Hello Nepal News » हिम्मतवाला मेस्सी : यसरी गरे कोपा आयोजकको भण्डाफोर !
हिम्मतवाला मेस्सी : यसरी गरे कोपा आयोजकको भण्डाफोर !
जेन्सी, असार २२
अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनल मेस्सीका लागि ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल निकै खराब र विवादित बन्यो । गत राति अर्जेन्टिना र चिलीबीच तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा मेस्सी खेलको ३७औं मिनेटमा रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएका थिए । भलै, सो खेल अर्जेन्टिनाले २–१ ले जित्यो । सामान्य मुद्दामा सोझै रातो कार्ड खाएर मैदान छाड्नु परेपछि मेस्सी निकै निराश भएका थिए । खेल दौरान चिलीका कप्तान ग्यारी मेडेलसँग उनको झडप भएको थियो । तर, पहिला मेस्सीमाथि मेडेलले आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि विवाद बढेको थियो । अन्ततः रेफ्रीले दुवै कप्तानलाई रातो कार्ड दखाए ।
खेलपछि मिडियासँग प्रस्तुत भएका मेस्सी निकै आक्रोशित देखिएका थिए । यतिसम्म कि, मेस्सीले आफूहरू दक्षिण अमेरिकी फुटबलको संस्थामा हुने भ्रष्टचार र गलत कुराको साक्षी बनेर नबस्ने मात्रै बताएनन्, ब्राजिललाई कोपा जिताउन सबै सेटिङ नै गरिएको आरोपसमेत लगाए । ‘त्यहाँ कुनै शंकै छैन कि, ब्राजिलको पक्षमा यहाँ सबै कुरा सेटिङ गरिएको छ,’ पत्रकारसँग आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका मेस्सीले भने, ‘सेमिफाइनलबाटै यो देखिँदै आयो । आज थप पुष्टि भयो ।’
मेस्सीले आफू र आफ्नो टिम फुटबलमा हुने खराब कुरा र भ्रष्टचारको साक्षी भएर नबस्ने पनि बताए । ‘म भ्रष्टाचारको अंग बन्न चाहन्नँ । र, हामी कोही पनि हुनुहुँदैन,’ मेस्सीले भने, ‘तर, यहाँ यस्तै भइरहेको छ । यो एकदमै निन्दनीय छ ।’ ‘म सधैं साँचो बोल्छु । म खेल जीवनमा ज्यादै इमान्दार छु । यसकारण म शान्त थिएँ । तर, अब पनि यसरी बस्नुहुँदैन । व्यापारका नाममा खेलमा भ्रष्टचारका रेखा देखिनु अपराध नै हो,’ मेस्सीले थपे ।
खेल जितेपछि अर्जेन्टिनाका सबै खेलाडी मेडल लिन सहभागी भए पनि कप्तान मेस्सी भने मेडल लिन उपस्थित भएनन् । मेडल वितरण सभामा सहभागी नभएर मेस्सीले मेडल बहिष्कार गरेका हुन् । खेलपछि पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै मेस्सीले कोपा आयोजक संस्थाभित्र रहेको भ्रष्टाचारको विरोध गर्न आफूले मेडल नलिएको बताए । ‘हो, मैले मेडल लिइनँ । किनभने, हामीलाई भ्रष्टचारको साथ दिनु छैन । यो समग्र कोपाकै बेइज्जत गरेजस्तो लागेको छ,’ उनले आक्रोशित हुँदै जवाफ दिए ।
प्रकाशित मिति २२ असार २०७६, आईतवार १२:१२